Faux yeganda haina kudhura, inogadzikana inogadzirwa neimwe nzira kune yeganda chairo. Inoshandiswa kumidziyo, mbatya, upholstery yemota, mabhegi, mabhandi uye nezvimwe. Faux dehwe rinogona kuwanikwa mumhando dzakasiyana, senge polyurethane, vinyl kana faux suede dehwe. Imwe yeidzi nzira dzinogona kucheneswa i ...
Hofisi Depot fekitori Kuongorora
Sehunyanzvi uye neyakareba rakabatana hukama mupiki, isu tichiri kufanira kugamuchira fekitori Audit kubva kuOffice Depot, iwo mutemo wekambani, kunyangwe iwe uri mutengesi wegoridhe! sezvamunoziva, Office Depot ndiyo yepasi rose kambani mazana mashanu, kambani hombe yemaketani ekutengesa! Ivo alwa ...
Zvakatipoteredza Dziviriro Zvivakwa
Anovimbika sosi akaraira svondo rapfuura kuti chiChinese chakaenzana neAmercian EPA ichaitisa imwe inotevera yekutenderera munaNov, Zvichienzaniswa negore rapfuura, kune dzimba dzakawandisa dzematanda dzinoshanda panguva ino. Pamusangano wenhau, Gurukota rezvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza MR Tang vakati th ...